Ukufa. Ukufundwa oku-6 kunye neendlela ezi-6 zokuqonda kunye nokuzixela | Uncwadi lwangoku
UMariola Diaz-Cano Arevalo | | Iincwadi, Inoveli, Amabali, Uloyiko
NgoNovemba, inyanga yabantu abafileyo. Ukuqala kwayo ngenkumbulo yabo bashiyeyo, ivumba lasekwindla lingwevu njengemibala ebomvu ebomvu, yokuba sisandulela sasebusika esihlutha indalo kwaye sicime ubomi. Kwaye bonke ubomi ngudade wabo: ukufa.
Kuba uKufa kudlula ecaleni kwethu yonke imihla kwaye kusibulisa ngobubele, nokuba asikuboni.. Uhlala encumile kuba uhlala esilindile. Ngeendlela eziliwaka, ethambileyo okanye ekhohlakeleyo, engafanelekanga okanye ekhululayo, ebugwala okanye ekhaliphileyo. Kwaye kukho iibhiliyoni zamabali apho kubonakala khona okanye kukhuthaza. Ndikhetha ezi 6 zifundwayo ndizimeleyo ukuba bandincede njani ukuba ndiqonde ixabiso okanye imibono yezo fomu. Sele ndimbulisile okwesibini, kodwa kule misonto iphethe ithuba, ikamva, ukuthanda kukaThixo okanye inkqubo ekhoyo, ndisamlindile.
1 Intliziyo yokubalisa- uEdgar Allan Poe
1.1 Impambano yokufa
2 Ndiyaphila - JJ Benítez
3 Ubukhulu bokufa
4 Idayari ka-Anne Frank-Anne Frank
4.1 UKUFA ngoonobumba abakhulu
5 Ngaphantsi kwamavili-uHerman Hesse
5.1 Ukufa kobuntununtunu
6 Inja yeBaskervilles-UArthur Conan Doyle
6.1 I-monster yokufa
7 Isiporho saseCanterville -Oscar Wilde
7.1 Uhlobo lokufa
Intliziyo yokubalisa -U-Edgar Allan Poe
Kuba ukuba kukho umntu obhale malunga ukufa kwiinqwelomoya zayo ezimnyama nezingenangqondo Yayingutitshala waseBoston lowo. Kweli bali lifutshane kunye nele Umzobo okweqanda Uloyiko kunye nobudenge zidityaniswe zalingana, kwaye kum zezona zoyikisayo.
Isazela sidliwe kukuzisola kombulali uqala ukuva ukubetha kwentliziyo yexhoba lakhe phantsi komhlaba. Intliziyo etshabalalileyo ephinda ibethe ide imenze ahlanye. Ukufa okuphindezela ngaphandle kwenceba kweyona mvelaphi yayo imbi. Iprodigy ebalisa umntu ophathe oko kufa kukufa njengoyena mhlobo wakhe unyanisekileyo. Ininzi kakhulu ngobuchule obuninzi njengoko iPoe enkulu ifanele ukuba isinike yona.
ndiyaphila -UJJ Benitez
Kuba ngubani owaziyo ngokwenene into asigcinele yona emva koko? Inye kuphela into yokuba akukho mntu ubuyileyo. Kodwa baninzi ababonakala ngathi bayenzile phakathi kwaye bakwazi ukwahlula into engaphaya kwengcaciso yesayensi. Kukho amalungelo athile (okanye hayi) abanxibelelane nabo bashiye ngaphaya kokudideka ngolunye uhlobo lobudenge.
Ewe, nguJJ Benítez, igunya lehlabathi kwizinto eziqhelekileyo nasekufikeleleni kuYesu ngokungaqhelekanga uYesu ngamahashe akhe eTrojan. Kodwa uhlala ekhona umntu, okanye endaweni yoko uninzi, onomdla ngokungaziwayo, abo izicwangciso ezingathethi ukukholelwa ukuba azikho.
UAnna ufrank Diary -U-Anna Frank
UKUFA ngoonobumba abakhulu
Ngenxa yokuba u-Anna Frank embonile, yena kunye nezigidi ezininzi, ngokubonakala kwakhe okhohlakeleyo, okukhohlakeleyo nokucekisekayo: leyo umntu anokukwazi ukumitha ayenze xa sele ephulukene nomphefumlo wakhe okanye engazange abe nawo.
UKUFA okwabonwa ngumJuda omncinci ongumDatshi akuphindwanga ngale ndlela okanye iimeko. Kodwa ayizange inyamalale kwaye, ekumangalisweni (okanye hayi) koluntu olucingelwa ukuba luphucukile ngakumbi (ide), imimoya yesihogo iyavuthuza kwakhona.
UKUFA okwabonwa nguAnna Frank kubonakala ngathi bekusoloko kusihlasela. Kungenxa yokuba mhlawumbi, yile konke ngaphandle kokukhetha kunokunika, kwamkele kwaye kwenziwe ngaphakathi.
Phantsi kweevili -UHerman Hesse
Lo ibali elisondeleyo ebhalwe nguHesse ngo-1906, esekwe kumava obuqu, yingxelo ka ukuthomalalisa ukujongela phantsi ubuntu bomntu ofikisayo. UHans giebenrath Uliqhayiya kuyise. Umntu ophumelele ezifundweni ekuvulelwa kuye yonke iminyango ngenxa yokuzinikela kwakhe kunye nempumelelo, kodwa ziyavalwa xa uHans evakalelwa kukuba ukuthanda kwakhe ukufunda kuye kwaba yinto ebangelwa luxinzelelo lwendalo yakhe.
Ubuntu bakhe obunobuthathaka buqala bavukele, emva koko bamkele, bathathe kwaye bagqibele ngokurhoxa phambi kokusilela kwabo bagwetyelweyo. Kude kube iphela ikwaphuka.
Mhlawumbi kungenxa yokuba wayifunda xa emdala kancinci kunoHans, kodwa Ukuzivelela kobukho bakhe kuncwadi kundishukumisile kangangokuba ndihlala ndiyifunda kwakhona ngamaxesha athile. Kwaye kum iya kuhlala ingafi.
Inja yeBaskervilles -U-Arthur Conan Doyle
Irhamncwa engokumila kwenja enkulu, ehlasela kwaye ibulale ngaphandle kwenceba kumanxweme angamaNgesi azele yimfihlakalo. Ewe bendinjalo USherlock Holmes Ukuyicombulula. Kwaye bobabini babenjalo izikweko zeenkolelo kunye nesayensi, zokoyikiswa ebusweni bokungaziwa kunye nesizathu uhlala ekhangela ingcaciso. Ngamafutshane, into esifuna ukuyichaza ngamagama, uyiqonde ngamandla ethu asikelwe umda.
USherlock uyasinceda, Kunye noWatson, uphanda olu lwaphulo-mthetho lungaqhelekanga kwimeko yenkolelo ekwafihla ukuziphindezela okumnyama kunye neBaskervilles kunye nendlu yabo. Y iyaphela, ewe, ngokufumana isisombululo kunye nenjongo ebangela uloyiko kunye nokungaqondani. Kodwa kuyabonwabisa kuphela. Zininzi izinja zaseBaskerville esizenzela zona yonke imihla. Kwaye abo basithandayo. Asikaze sikhuseleke kubo, nditsho noSherlock Holmes.
Isiporho saseCanterville - Oscar Wilde
Kubangubani ongafuni ukuba kwibhotwe lakhe lesiNgesi, okanye endlwini yakhe, isiporho njengoSir Simon waseCanterville? Ngubani ongenakuziva eyonwabisayo kwilishwa lokuhambahamba kumagumbi abandayo nakwiigalari? Ukurhuqa imixokelelwane enzima, ukupeyinta amachibi egazi, nokuzama ukoyikisa abo bangakholwayo, abacaphukisayo, iidyokhwe zeyankee abathenga ikhaya lakho laphakade ngaphandle kwempumelelo?
Ngubani ongenayo iminyaka elishumi elinesihlanu kaVirginia Otis kwaye engazange amsizele? Ngubani ongenakumnceda njengaye ukuba aphumle ngoxolo kube kanye? Akukho namnye. Y USir Simon Canterville ufikelele kolo phumlo kudala lulindelwe kodwa usazula-zula, kwaye uya kuthi, kuzo zonke iinqaba zethu zamaphupha kunye neencwadi, yeminqweno yokuba, mhlawumbi, ekufeni, siqhubeke nokubakho ngaphandle kokoyikwa okanye ukujikeleza izithunzi, kodwa njengomoya onjengaye. Enkosi ku Oscar Wilde singayenza. Ngokuqinisekileyo badibana kwakhona.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » Inoveli » Ukufa. Ukufundwa kwe-6 kunye neendlela ezi-6 zokuyiqonda nokuyiqonda
Udliwanondlebe no-Estela Chocarro: Inoveli yeNoir kweyona Navarra yasemaphandleni.